Coves of Menorca: ciid cad iyo biyaha buluuga ah ee turquoise | Wararka Safarka
Hoteellada ku yaal Menorca
ka bakhaarrada Menorca waa mid ka mid ah jiidashada weyn ee jasiiradda this iska leh Baalal. Waa tan labaad ee ugu weyn jasiiradaha iyo ta toddobaad ee Spain. Sidoo kale waa tan saddexaad ee ugu dadka badan, kadib Mallorca iyo Ibiza.
Waxay leedahay taariikh qani ah oo ka bilaabma dhaqanka talayotiga, meelo badan oo xiiso leh, magaalooyinka caadiga ah iyo jardiinooyinka dabiiciga ah oo ku soo jiidan doona. Waxaas oo dhan, waxaan dooneynaa inaan ku tusino qaar ka mid ah coves ugu fiican Menorca. Laakiin waxaan sidoo kale dooneynaa inaan kaala hadalno waxaad booqan karto hal mar iyaga oo ku dhex jira. Sidan, adiga joog xeebahaas cajiibka ah waxay noqon doontaa mid aad u kobcisa.
1 Coves of Menorca: Muuqaalo riyooyin leh iyo biyo buluug ah oo turquoise ah
1.5 Cove gudaha Porter
1.6 Cala Mitjana, mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee Menorca
Coves of Menorca: Muuqaalo riyooyin leh iyo biyo buluug ah oo turquoise ah
Si aad u badan ayaa ah noocyada kala duwan ee coves of Menorca oo aad ka heli karto iyaga oo waasac ah oo leh dhammaan adeegyada. Laakiin sidoo kale kuwa kale oo ka fog oo qurux badan kuwaas oo ilaashaday dabeecadooda duurjoogta ah.
Intooda badan waxa ku xidhan waxa loogu yeedho Camí de Cavals, waddo dhan laba boqol iyo labaatan kiilo mitir oo dhex marta jasiiradda oo dhan. Asalkeedu wuxuu dib u soo laabtay qarnigii XNUMXaad waxayna lahayd shaqada ilaalinta Menorca weerarrada badda. Si kastaba ha ahaatee, hadda waxay kuu samaynaysaa dariiq kugu habboon oo aad u bixi karto. Laakiin, iyada oo aan wax dheeraad ah lahayn, waxaanu ku tusi doonaa qaar ka mid ah coves ugu fiican Menorca.
Waxay ku taal koonfur-bari ee jasiiradda, waa mid ka mid ah coves-ka ugu caansan Menorca. Sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan. Waxaad ku qadarin kartaa markaad aragto ciid cad oo qurux badan, biyaheeda buluugga ah iyo kaymaha geedaha ah ee ilaaliya. Laakin sidoo kale indha indheynta sodonka mitir ee dhagaxyada dhaadheer ee ku dhejisan.
Si sax ah, iyada oo loo marayo Camí de Cavals, waxaad ku soo dhowaan kartaa Macarelleta cove. Sida magaca laftiisa ka muuqata, xitaa wuu ka yar yahay kii hore, laakiin maaha mid soo jiidasho leh. Intaa waxaa dheer, tan waxaad ku dhaqmi kartaa qaawannimada, haddii aad rabto.
Dhanka kale, meel u dhow Macarella waxaad ku leedahay laba ka mid ah meelaha ugu quruxda badan Menorca. Mid waa tuulada Talayotic ee torrellafuda, mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan jasiiradda. Waxay ka tirsan tahay taariikhda hore, markii dhaqankani uu ka talinayay jasiiradda. Haddii aad booqato, waxa aad awoodi doontaa in aad qadariso dhawr taalo ama dhismayaal caadi ah, taulas ama taallooyin, godad xabaaleed iyo hadhaagii guryaha.
Marka la eego booska labaad waa cajiib Godka Murada, galbeed ka sii xiga. Waa tan ugu weyn dhammaan Dooxa Algendar iyo, in kasta oo ay sabab u tahay nabaad guurka dabiiciga ah, haddana waxaa dib u soo celiyay nin. Gaar ahaan, waxay ku dartay qoto dheer iyo, dhammaan ka sarreeya, dhistay derbiyo duufaan leh. Kuwani sidoo kale waxay ka tirsan yihiin xilligii Talayotic iyo ujeedada godadkaas, waxay u egtahay, inay u adeegaan sidii meelo xabaaleed oo wadajir ah.
Cala Morell, mid ka mid ah coves ugu soo jiidashada badan Menorca
Waxaan hadda u jeednaa mid kale oo ka mid ah coves ugu quruxda badan ee Menorca, oo ku yaal waqooyi-bari ee jasiiradda, oo aad ugu dhow Punta Nati lighthouse. Tani waa mid ka mid ah kuwa sameeya wicitaanka Jidka todobada laydh, Safar xeebeed qurux badan oo dhismooyinkan ah oo ay ku jiraan kuwa Cavallería, Favàritx, Artrutx, San Carles, Ciudadela iyo Isla del Aire.
Ku noqoshada Cala Morell, waxaa laga yaabaa inaad ka niyad jabto cabbirkeeda yar. Waa xeeb yar oo aan ciid lahayn oo xitaa ay qasab noqotay in dhagaxaanta laga dul dhisto meelo dabaasha ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxa ay ku guulaysatay in ay ilaaliso dhammaan soo jiidashada dabiiciga ah iyo muuqaalkeeda inkastoo ay ku sugan tahay goob dalxiis. Intaa waxaa dheer, biyaheedu waa cad cad waxaana ku hareeraysan muuqaal dhagax ah oo cajiib ah. Sida haddii waxaasoo dhan aysan ku filneyn, agteeda waxaad arki doontaa a necropolis talayotic leh godad badan oo taariikhi hore.
Soojiidashada kale ee ka dhigaysa Morell mid ka mid ah coves-ka ugu xiisaha badan ee Menorca waa u dhawaanshaheeda Qalcadda, caasimadda qadiimiga ah iyo magaalada ugu dadka badan jasiiradda. Malaha waa sababta ay u leedahay hawo qurxoon iyo magaalo qadiimi ah oo aad u qurux badan.
Waxa ay ka kooban tahay wadooyin cidhiidhi ah oo qurux badan waxaana ku jira taallooyin ay ka mid yihiin Menorca cathedral, dhismaha Gothic ee qarnigii afar iyo tobnaad. Aad ugu dhow waa Plaza del Borne, halkaas oo aad ka arki karto obelisk ah oo bixiya abaalmarinta difaaca jasiiradda ee Turkiga 1558.
Midka hore ku xiga waa Plaza de la Esplanada iyo, aad ugu dhow, dekedda halkaas oo ah risiqa. Dhacdadan dabeeciga ah waxay ka kooban tahay in mawjadadu ay biyuhu gariiraan ilaa laba mitir ilaa ay ka buuxsamaan oo ay noqdaan kuwo cajiib ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaad awoodi doontaa inaad aragto xagaaga iyo xaaladaha cimilada qaarkood.
Ugu dambeyntii, waxaad booqan kartaa Ciudadela ah qalcaddii San Nicolás, oo la dhisay dhamaadkii qarnigii XNUMX-aad iyo Matxafka dawladda hoose, kaas oo lagu soo bandhigay tiro badan oo walxo taariikhi ah.
Waxaan ku laabaneynaa koonfur-bari ee Menorca si aan u booqano cowskan kale, oo aad ugu dhow Macarella. Dhab ahaantii, waxay ku biireen Camí de Cavals oo aan horay kuugu sheegnay. Magaceeda waxaa loola jeedaa midabka buluugga ah ee turquoise ee biyaheeda.
Waxa ku hareeraysan kaymo geedo ah oo aad hadh ka heli doonto maalmaha qorraxdu u badan tahay, dhagaxuna wuxuu u kala qaybiyaa ciiddiisa. Waa xeeb-duur-duur-joog ah, laakiin waxay hore u leedahay adeeg badbaado iyo xitaa baar xeeb yar oo aad wax ka cuni karto.
Dhanka kale, waxaa u dhow Talaier cove iyo garoonka Son Saura. Laakiin waxaad sidoo kale ka heli doontaa xiiso leh in la ogaado in wax yar ka sii dheer yahay Cova des Pardals. Waxaa hore u isticmaali jiray kalluumaysatada iyo mukhalasiinta, laakiin hadda waad booqan kartaa oo waxaad ku raaxaysan kartaa aragtiyo aan caadi ahayn oo ku saabsan badda Mediterranean-ka. Helitaanka waa sahlan tahay, maadaama ay xitaa leedahay jaranjaro.
Waxa kale oo laga helaa koonfur-bari ee jasiiradda, laakiin, kiiskan, galbeed ka sii dheer kuwii hore. Waa gogol ballaadhan oo leh waxqabadyo madadaalo oo badan. Tusaale ahaan, waxaad kiraysan kartaa matoor ama doomo baalle. Inkasta oo aad leedahay adeegyo badan, maaha xeeb weyn. Dhererkiisu waa dhawr boqol oo mitir oo balac ah ku dhawaad ​​afartan mitir. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay qaab qolof ah, taas oo ka dhigaysa mid aad u ammaan ah musqusha.
Waxa kale oo aad leedahay baarkin baabuur oo xeebta agteeda ah, inkasta oo uu jiro khad bas ah. Si kastaba ha ahaatee, maadaama aan ka hadlayno doomaha, waxaa fiican inaad timaaddo koofiyadan adigoo raacaya mid ka mid ah doonyaha u socdaalaya xeebta Menorcan oo aad halkaas ku joogsato. Maskaxda ku hay in Galdana ay tahay dariiqa dabiiciga ah ee badda looga baxo tog. Sababtaas awgeed, waxaa ku hareeraysan dhagaxyo cajiib ah iyo dhir badan. Sidaa darteed, aragtida badda ayaa ah mid cajiib ah.
Ka dib markaad ku qubeysato biyaheeda nadiifka ah, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad kor u kacdo aragtida ku taal mid ka mid ah dhagaxyada dhisa xeebta. Waxaad yeelan doontaa aragtiyo cajiib ah oo ku saabsan xeebta Menorcan.
Cove gudaha Porter
Waxaa laga yaabaa in xitaa ka sii cajiibsan ay tahay cove-kan oo ku yaal koonfurta Menorca. Waxaa loo qaabeeyey laba dhagax oo waaweyn waxayna leedahay adeeg hammock ah iyo adeegyo kale. Ka dib markaad ku raaxaysato biyaheeda buluuga ah ee turquoise, waxaad ku raaxeysan kartaa inaad tagto Cova ee Xoroi, god dabiici ah oo lagu rakibay diskooga.
Laakiin, marka lagu daro, meel u dhow Cala en Porter waxaad ka heli doontaa Mahon, magaalada kale ee weyn ee jasiiradda iyo caasimaddeeda hadda. Ha iloobin inaad booqato, maadaama ay wax badan ku hayso. Sida xiiso leh, waxaan kuu sheegi doonaa in xilligeeda degmada ay tahay barta bari ee Spain oo dhan.
Laakiin waxaan kugula talineynaa inaad aado dekeddeeda dabiiciga ah, oo aad u qurux badan sidoo kale leh afar jasiiradood: kuwa King, Lazareto, Quarantine iyo Pinto. Si sax ah, afka dekeddu waa La Mola qalcaddii, oo la dhisay bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad si loo difaaco jasiiradda.
Waa inaad sidoo kale booqataa Mahon the Saldhigga Saint Roc, hadhaagii darbigii hore ee magaalada ilaalin jiray. Laakiin dhammaan ka sarreeya, the kaniisadda Santa Maria, oo leh xubinteeda cajiibka ah, iyo kaniisadda Carmen. Dhankeeda, dhismaha Hoolka Magaaladu wuxuu ka jawaabayaa qaabka neoclassical.
Ugu dambeyntii, meel u dhow Mahón waxaad haysataa Marlborough iyo haraadiga talayootiga Talatí ee Dalt. Oo, haddii aad u dhawaato aagga ee Albufera des Grau, waxaad arki doontaa muuqaal ka duwan jasiiradda inteeda kale.
Cala Mitjana, mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee Menorca
Waxay ku taal koonfurta Menorca, waxay sidoo kale u taagan tahay ciiddeeda cadcad ee wanaagsan iyo biyaha buluugga ah ee turquoise. Waxaa loo tixgaliyaa cove bikrad ah waxayna ku siinaysaa muuqaal cajiib ah. Si kastaba ha noqotee, haddii ay u muuqato mid duurjoog ah adiga, ku xigta waxaad haysataa Cala Mitjaneta, weli ka yar oo aan booqan.
Waxa ay leedahay baarkin aad u dhow, waana meesha laga baxo badda oo tog ah. Sababtaas awgeed, waxaa ku hareeraysan dhagaxyo cajiib ah iyo dhir badan. Si kastaba ha ahaatee, gelitaanka cove waa fududahay. Xataa waxaa jira khadka baska. Laakiin, haddii aad door bidayso inaad u safarto si ka sii raaxo badan, waxaan kugula talineynaa inaad ku sameyso badda. Waxaa jira dhowr doomood oo ka gudba xeebta Menorca oo halkaas ku hakadaan.
Dhanka kale, xeebtani waxay ku taal degmada Biraha, aaway qalcaddii Santa Águeda, oo ku yaal xagga sare ee buurta isku midka ah. Waxaa lagu dhisay waqtiyadii Carabta oo ku yaal dhufeysyadii hore ee Roomaanka, waxaa la rumeysan yahay in la dhisay qarnigii 1987aad. Ilaa XNUMX waxay ahayd Hantida Danaha Dhaqanka.
Gebagebadii, waxaanu ku tusinay qaar ka mid ah coves-ka ugu fiican ee Menorca, iyo sidoo kale meelaha xiisaha u dhow ee xitaa noqon kara hawlo carruurta. Laakiin waxaa jira meelo kale oo badan oo bacaad ah oo si la mid ah u qurux badan. Tusaale ahaan, Pregonda cove, geedka Pilar o Escorxada cove.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Menorca » Hoteellada ku yaal Menorca
Waxa lagu sameeyo magaalada hore ee Cuenca